Khurak Online | पार्टीलाई योगदान गरेकोले जिम्मा पाउने हो की जनतालाई योगदान गर्न सक्नेले ? YP: Achrya - Khurak Online पार्टीलाई योगदान गरेकोले जिम्मा पाउने हो की जनतालाई योगदान गर्न सक्नेले ? YP: Achrya - Khurak Online
यदि लोकतन्त्र हो भने ! पार्टीलाई योगदान गरेकोले जिम्मा पाउने हो की जनतालाई योगदान गर्न सक्नेले? विगतलाईमात्र हेर्ने हो की भविश्यलाई पनि ? सत्ता सञ्चालन क्याम्पसको परीक्षा जस्तो (पास नहुँदा सम्म दिईरहने) हो की परीक्षण (tested) भएपछि अलग हुने हो ? लोकतन्त्रमा नेतृत्व विकास र हस्तान्तरण चक्रीय रुपमा हुन्छ की लम्बीय (vertical) रुपमा? लोकतन्त्रमा जनताको अनुभूति (feelings) को मूल्य हुन्छ की नेताको सहानुभूतिको ? आवधिक निर्वाचनमात्रै लोकतन्त्रको कसी हो की नैतिकता र सस्कार पनि ? सक्षम नेतृत्व पार्टी भित्रमात्रै हुन्छन् की बाहिर पनि? के नेपालको राजनीतिक नेतृत्व उत्पादन गर्ने नर्शरी उपयुक्त छ ?
कीन अमेरीकामा हिलारी क्लिनटन आगामी चुनावमा उम्मेद्वार बनिनन् ? के फिनल्याण्डका प्रधानमन्त्री Sanna Marin, अष्ट्रीयाका Chancellor Sebastian, मालीका राज्य प्रमुख Assimi Goita, क्यानडाका प्रधामन्त्री Justin Pierre James Trudeau लगायतका युवा नेताहरूले ७० वर्ष नहुन्जेल सत्तामा टासिई रहने अभिलासा राख्लान ? के बाराक ओवामा, विल्लक्लिन्टन, जर्जडब्लु बुस पुनः सत्ता सम्माल्ने लाईनमा लाग्लान ? अवस्य लाग्दैनन् किन की यीनिहरू लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्छन ।
लोकतन्त्र होईन भने
राजा महेन्द्रलाई पनि राजाले मात्रै पुगेन, ज्ञानेन्द्रलाई पनि राजा र प्रधानमन्त्री दुबै हुँने भोग जाग्यो, हिटलरको पनि लामो समय प्यास मेटिएन, रुसमा पुटिन अझै भोको देखिए, क्युवामा क्स्त्रो परिवार, उत्तर कोरियामा सुङ्गको परिवार वरिपरी सत्ता घुम्यो (कम्युनिष्टले चाहेको पारिवारिक व्यवस्था होईन ) देश भने जहाँको त्यहि । नेपालमा तथाकथित (so called) लोकतन्त्र आए पछि पनि मुठ्ठिभरका (handful) नेताको (नाम लेखिरहन परेन -जुनसुकै पार्टीका) वरिपरि सत्ता रह्यो । यी सबै रुपमा फरक भए पनि सारमा निकट देखिए ।
को व्यक्ति के भयो भन्ने चिन्ता भन्दा पनि राजनीतिक संस्था बन्न सकेन, लोकतन्त्र रगत रगतमा पुगेन भन्ने चिन्ता हो । व्यक्ति बन्ने संस्था नबन्ने हुँदा देश नबन्ने हुँने रहेछ । देश नबन्दा जनताको युगानुकुल जीवन नबन्ने रहेछ । त्यसैले संस्था बनाउन पट्टी लागौँ ब्यक्ति होईन । नैतिकता र संस्कार बिकास गरौँ पदको विस्तार होईन । सहानुभूतिले होईन भिजन र कार्यसम्पादनले अवसर पाउनु पर्यो । अहिलेसम्म केहि पाएको छैन विचरालाई दिनु पर्छ होईन उसले जनतालाई के दिन सक्छ त्यो हेर्नु पर्यो । कुन गर्भबाट जन्मेको हेर्ने होईन तागत के छ हेर्नु पर्यो । Tested पाखा लाग्नै पर्छ । २०६३ पछि हामीले अपनाएको voters know the best भन्ने पद्दती हो । त्यसैले आगामी दिनमा पनि हामी voters ले बुझेनौ भने प्रणालीनै असफल हुँने लाईनमा जाने छ । त्यस पछि हामीसंग दुईवटा मात्र विकल्प हुँने छन् कि त अराजनीतिको दुश्चक्रमा पिसिने वा अर्को क्रान्ति गर्ने । त्यो चरणमा नपुग्दै लोकतन्त्रलाई बचाउँ ।